Min Residence (Oxley Holdings Co.,Ltd and Mottama Development Group Co.,Ltd.) | iMyanmarHouse.com
13339 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး
Min Residence ကို Lot 1A(A), 3A (A) Mindhama Road, Mayangone Township, Yangon တွင် Oxley Holdings Co.,Ltd and Mottama Development Group Co.,Ltd မှတာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။
Singapore နိုင်ငံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံးသော Developer များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Oxley Holdings ၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပထမဦးဆုံးသော ခြေလှမ်းသစ်တစ်ခုအဖြစ် မင်းဓမ္မလမ်းမရှိ (၃.၁၈ ဧက)ကျော် ကိုယ်ပိုင်မြေပေါ်တွင် Min Residences အမည်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Mix Used Condominium ကိုစတင်တည်ဆောက်အကောင်ထည်ဖော်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
Oxley Holdings သည် Singapore နိုင်ငံတွင်သာမက UK, Ireland, China, Indonesia, Cambodia အစရှိသောနိုင်ငံများတွင်လည်း အောင်မြင်မှုရရှိနေပြီး Property လောကတွင်ဦးဆောင်နေသော company များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ Condominium များတွင်ပါဝင်လေ့ရှိသည့် Standard Facilities များအပြင် 50m Infinity Lap Pool, Aqua lounge, Rock Climbing, Library, Yoga Pavilion, Child Care Center,Kids Wonderland, Putting Green, Tennis court, Basketball Court, Zen Garden, 200m Jogging Track, Alfresco Dining, အစရှိသည့်မည်သည့် Condo တွင်မှပါဝင်ခြင်းမရှိသေးသော facilities အမျိုးပေါင်း (၆၀) ကျော်ပါဝင်မည့် ပထမဦးဆုံး Condo Project တစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီကွန်ဒိုမီနီယမ် ပြယုဂ်စစ်စစ်တစ်ခုအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Min Residences အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယမ်အိမ်ရာကို Tower (3)လုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လူနေအိမ်ခန်းပေါင်းခြောက်ရာကျော်ပါဝင်ပြီး အိပ်ခန်း(၂)ခန်းမှစ၍ (၄)ခန်းအထိ ရှိပြီးရွေးချယ်စရာအခန်းဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား ရှစ်မျိုးကျော်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အခန်းများအားလုံးကို သေသပ်လှပစွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့်အပြင် သဘာဝအလင်းရောင် လေဝင်လေထွက်မှစ၍စနစ်တကျ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီး အိမ်အကူခန်း၊ စတိုခန်းအစရှိသည်တိုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမိသားစုများအကြိုက်စနစ်တကျဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားပါသည်။
ဝယ်ယူသူများ အံ့အားသင့်စေမည့် ငွေပေးချေမှုပုံစံအသစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
50 m Infinity Pool
The Arena-Outdoor Gym
The Arena Functional Training
200m Jogging Track
Game Viewing Gallery
Changing and Shower Room
Min Club Lounge
Gastronomy BBQ Dining
Grand Multipurpose Hall
Kid's Adventure Play
Meditation Sky Garden (Tower A 13th STY)
Chillout Sky Garden (Tower B 13th STY)
Relaxation Sky Garden (Tower C 13th STY)
အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသည့် နေရာများ
Lot 1A(A), 3A (A) Mindhama Road, Mayangone Township, Yangon
သမိုင္း City mart
9 Mile Ocean
8 Mile Junction
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ
Oxley Holdings Co.,Ltd and Mottama Development Group Co.,Ltd.
Lot 1A(A), 3A (A) Mindhama Road, Mayangone Township, Yangon.
ဤ Project နှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ဝင်စားပါက အောက်ပါဖောင်တွင် ဖြည့်စွက်၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဤ Project အကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။